Ukusebenza Of Rose Caphula
ngomphathi ku 20-09-14
Ukusebenza kunye nenjongo yendalo ethambileyo, inokuthomalalisa iimvakalelo, ibhalansi ye-endocrine, yondle igazi, intle ukhathalelo lolusu, ilawule isibindi kunye nesisu, ikhuphe ukudinwa, iphucule ukomelela komzimba, i-rose iti inencasa ebuthathaka nenhle, enokuthi inciphise iimvakalelo kunye nokunciphisa uxinzelelo, ingayiphucula ...
Ukuthatha indlela Thatha icephe elinye ixesha ngalinye, malunga ne-1 ukuya kwi-1.5 yeegramu, kwaye uthathe ngamanzi ashushu, isiqingatha seyure emva kwesidlo sakusasa kunye nesidlo sangokuhlwa, kunye nesiqingatha senyanga. Idosi yemihla ngemihla Eyona idosi ilungileyo yemihla ngemihla yi-2 ukuya kwi-3 gram, kanye ekuseni kunye nakanye ngokuhlwa. Ukuthatha ixesha ngokwemigaqo ye ...
Imigangatho yokukhutshelwa kwamayeza amaTshayina
Uninzi lwezicatshulwa zamayeza esiTshayina ikakhulu zithunyelwa kumazwe angaphandle. Oku kunokuhambelana nento yokuba kusekho umahluko omkhulu kwiimbono zamayeza amaTshayina kwizicatshulwa zamayeza amaTshayina. Abantu abaninzi bacinga ukuba izicatshulwa zamayeza amaTshayina zahluke kakhulu kwez ...
Isiqhamo seBlue Tea sokuSebenza
Phinda udibanise udakada nesisu I-nectar yeentyatyambo yaseJamani iqulethe inani elikhulu levithamini C, kwaye iziqhamo kunye neentyatyambo ezahlukeneyo zineempawu zazo. Phakathi kwazo, iidiliya zimnandi kunencasa, i-dao izolile kwindalo, isondla isibindi kunye nezintso, yondla i-qi kunye negazi, ikhuthaza ulwelo lomzimba, ikhuthaza ...
Ukwenziwa kwezixhobo zoNyango
Inkqubo yeNet Susa ukhula, isanti kunye nezinto ezingezizo ezamayeza. Ngokweemfuno zeentlobo ezahlukeneyo, ezinye kufuneka zikrwele ulusu, ezinje ngeengcambu ezimhlophe zepeony; ezinye kufuneka zisike amaxolo arhabaxa, njengekhokho; ezinye kufuneka zisuse intloko yengcongolo, ingcambu enemicu kunye namasebe ashiyekileyo ...